I Patrick Karegeya dia miaramila mpioko sady lehiben'ny sampan-draharaha mpikaro-baovao tao Oganda sy tao Roanda. Teraka tamin'ny taona 1960 tao Mbarara any Oganda izy ary maty nisy nanakenda tamin'ny 1 Janoary 2014 tao Johannesburg ny Afrika Atsimo. Isan'ireo mpanohitra ny fitondran'i Paul Kagame izy.
1 Mpitolona any ivelan'i Roanda
1.1 Teraka ary be tany Oganda
1.2 Mpitolona tao amin'i FPR
2 Lasa mpaohitra an'i Paul Kagame
2.1 Nanohitra ny fitondran'i Paul Kagame
Mpitolona any ivelan'i RoandaHanova
Teraka ary be tany OgandaHanova
Mpitsoa-ponenana roandey tany Oganda ny ray aman-dreniny. Tamin'ny taona 1982 izy dia nahazo ny diplôma lisansa amin'ny fianarana lalàna tao amin'ny Université Makerere any Oganda.
Mpikambana tao amin'ny Armée de résistance nationale izy nandritra ny Ady anaty akata ogandey (1981-1986). Voasambotra izy tamin'ny taona 1986 satria nampangaina ho mpivadika, ka nigadra telo taona. Niditra ho mpikambana tao amin'io fikambanana io indray izy taty aoriana. Nahita fahombiazana ilay fikambanana rehefa nahazo ny fitondrana ny filoha Yoweri Museveni tamin'ny taona 1986. Lasa filohalefitry ny sampana miady amin'ny fitsikilovana i Karegeya tao amin'ny governemanta ogandey vaovao (Directorate of Military Intelligence).
Mpitolona tao amin'i FPRHanova
Nandray anjara tamin'ny fananiham-bohitra an'i Roanda, izay nitondran'i Juvénal Habyarimana filoham-pirenena, i Karegeya tamin'ny fikambanan'ny Front patriotique rwandais (FPR) sy ny tafika ogandey. Tamin'izany fotoana izany dia mpiara-mitolona izy sy i Paul Kagame ary lasa tele jeneralin'ny raharaham-pakam-baovao ivelany tao amin'ny Armée patriotique rwandaise tamin'ny taona 1994 raha nandrombaka ny fitondrana ny FPR taorian'ny fandringanam-taranaka tao Roanda. Izy no nandrindra ny fikaroham-baovao roandey nandritra ny Ady Faharoa tao Kôngô (1998-2003). Izany ady izany dia isan'ireo nahafatesana olona betsaka tamin'ny taonjato faha-20. Nijanona tamin'io andraikiny io izy hatramin'ny taona 2004, fotoana nahatonga azy ho mpitondra tenin'ny foloalindahy roandey.
Lasa mpaohitra an'i Paul KagameHanova
Nanohitra ny fitondran'i Paul KagameHanova
Taty aoriana i dia nampangaina ho tsy manaja lehibe sy mpitsoaka an-daharana na nogadraina. Nesorina taminy ny mari-boninahitra kôlônely tamin'ny taona 2006.
Afa-andositra avy tao Roanda izy tamin'ny taona 2007 ka nahazo fialokalofana tany Afrika Atsimo. Tao izy no niampanga an'i Paul Kagame fa mpanao didy jadona. Niampanga azy ho nanomana ny vono olona niseho tao Kigali tamin'ny taona 2010 ny governemantan'i Kagame, nanda izany i Karegeya. Nanambarany ny fahafantarany mazava fa i Paul Kagame no tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'ny mpanohitra maro. Tamin'ny taona 2013 dia nanambara i Karegeya fa afaka manome porofo fa i Paul Kagame dia isan'ny tompon'andraikitra tamin'ny famonoana ny filoha roandey Juvénal Habyarimana (iaraka tamin'ny filoha borondey) tamin'ny taona 1994, dia ilay vono olona nampipoka ny fandringanana tao Roanda. Niampanga an'i Karegeya koa i Paul Kagame fa i Karegeya dia miasa ao amin'ny sampan-draharahan'ny fikaroham-baovao miaramila afikana tatsimo.
Tamin'ny fiantombohan'ny taona 2014 dia nikasa hamonjy ny fihaonambe hataon'ny Congrès national du Rwanda (CNR) (antoko manohira an'i Paul Kagame) i Karegeya. Izany fihaonambe izany dia kasaina hatao ao Johannesburg. Talohan kelin'izany fivoriana izany dia maty nisy nanakenda tao amin'ny efitry ny trano fandraisam-bahiny nisy azy izy tamin'ny tolakandron'ny 1 Jaoary 2014. Niampanga ny governemantan'i Paul Kagame ho nahavanona izany vonoana olona izany ny CNR. Talohan'io dia iefa betsaka ireo lohandohany ao amin'ny fanoherana ny governemantan'i Paul Kagame no maty misy mamono na manjavona tsy hita. Talohan'io koa dia saika nisy namono tao Afrika Atsimo koa ilay mpanohitra roandey Faustin Kayumba Nyamwasa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrick_Karegeya&oldid=1011763"
Dernière modification le 16 Mey 2021, à 16:05
Voaova farany tamin'ny 16 Mey 2021 amin'ny 16:05 ity pejy ity.